Puntland oo heshiis la geli doonta shirkada DP World - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo heshiis la geli doonta shirkada DP World
March 10, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa la filayaa in ay heshiis la gasho shirkada DP World si ay u maamusho una hormariso dekada Boosaaso, ilo-wareedyo madaxtooyada katirsan ayaa u xaqiijiyay warsidaha Puntland Mirror.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa u safri doona magaalada Dubai maalmaha soo aadan, halkaas oo uu ku saxiixi doono heshiiska u dhaxeeya Puntland iyo DP World, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Puntland ayaa hadda wajahaysa markii ugu xumayd ee qalalaase dhanka dhaqaalaha ah, oo ay sababeen musuqmaasuqa balaaran oo ka dhexjira haayadaha dowladda iyo abaarta daran ee ku dhufatay gobolka.
Bilihii lasoo dhaafay, ciidamada Puntland ayaa sameeyay gadood ay kaga cabanayaan musha’haar la’aan muddo ka badan sanad. Gobolka ayaa sidoo kale wajahay weeraro dhiig ku daatay oo lagu bartilmaameedsaday saraakiisha dowladda, oo ay masuuliyadooda sheegteen ururada argagixisada ah sida Al-Shabaab iyo ISIS.